Ahoana ny fiarovana amin'ny fampandrenesana mena avy amin'ny Interpol, fangatahana fanitarana any Dubai
Lalàna momba ny heloka bevava iraisam-pirenena
Ny International Criminal Police Organization (Interpol) dia fikambanana iraisam-pirenena. Niorina tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 1923, manana firenena 194 izy amin'izao fotoana izao. Ny tanjony lehibe dia ny ho sehatra iray ahafahan'ny polisy avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao mivondrona hiady amin'ny heloka bevava sy hahatonga an'izao tontolo izao ho azo antoka kokoa.
Ny Interpol dia mampifandray sy mandrindra tambajotran'ny polisy sy manampahaizana momba ny heloka bevava manerana izao tontolo izao. Ao amin'ny firenena mpikambana tsirairay ao aminy dia misy ny Birao foibe nasionaly INTERPOL (NCBs). Ireo birao ireo dia ataon’ny tompon’andraikitry ny polisim-pirenena.
Ny Interpol dia manampy amin'ny fanadihadiana sy famakafakana angon-drakitra momba ny heloka bevava, ary koa amin'ny fanaraha-maso ireo mpandositra ny lalàna. Manana angon-drakitra afovoany misy fampahalalana betsaka momba ny mpanao heloka bevava azo idirana amin'ny fotoana tena izy izy ireo. Amin’ny ankapobeny, io fikambanana io dia manohana ireo firenena amin’ny ady ataony amin’ny heloka bevava. Ny sehatra ifantohana lehibe dia ny cybercrime, ny heloka bevava voarindra ary ny fampihorohoroana. Ary satria mivoatra hatrany ny asan-jiolahy, dia miezaka ihany koa ny fikambanana mba hamolavola fomba maro hikarohana ireo jiolahy.
Fampandrenesana mena dia fampandrenesana fijerena. Fangatahana ho an'ny mpampihatra lalàna iraisam-pirenena eran-tany ny hanaovana fisamborana vonjimaika amin'ny olona iray voalaza fa mpanao heloka bevava. Ity fampandrenesana ity dia fangatahan'ny mpampihatra lalàna amin'ny firenena iray, mangataka fanampiana amin'ny firenena hafa hamahana heloka bevava na fisamborana mpanao heloka bevava. Raha tsy misy io fampandrenesana io dia tsy azo atao ny manara-maso ireo mpanao heloka bevava avy amin'ny firenena iray mankany amin'ny manaraka. Manao izany fisamborana vonjimaika izany izy ireo mandra-piandry ny fanoloran-tena, ny fampodiana, na ny hetsika ara-dalàna hafa.
Amin'ny ankapobeny, ny INTERPOL dia mamoaka ity fampandrenesana ity noho ny baikon'ny firenena mpikambana iray. Tsy voatery ho firenena niavian'ilay voarohirohy ity firenena ity. Na izany aza, dia tsy maintsy ho ny firenena izay nanao ny heloka bevava. Ny famoahana fampandrenesana mena dia raisina amin'ny zava-dehibe indrindra manerana ny firenena. Midika izany fa manohintohina ny filaminam-bahoaka ilay voarohirohy ka tokony horaisina araka izany.
Ny filazana mena anefa dia tsy didy fampisamborana iraisam-pirenena. Fampandrenesana olona tadiavina fotsiny izany. Izany dia satria ny INTERPOL dia tsy afaka manery ny mpampihatra ny lalàna any amin'ny firenena rehetra mba hisambotra olona iray izay iharan'ny fampandrenesana mena. Ny fanjakana mpikambana tsirairay dia manapa-kevitra ny amin'izay lanja ara-dalàna apetrany amin'ny Fampandrenesana Mena sy ny fahefan'ny manampahefana mpampihatra lalàna azy hanao fisamborana.
7 karazana filazana Interpol
Ny fampandrenesana mena no henjana indrindra amin'ireo filazana rehetra ary mety hiteraka voka-dratsy eo amin'ireo firenena eran-tany ny famoahana azy. Mampiseho izany fa manohintohina ny filaminam-bahoaka io olona io ka tokony hokarakaraina toy izany. Ny tanjona amin'ny fampandrenesana mena dia matetika fisamborana sy fampodiana.
Ny extradition dia faritana ho dingana ara-dalàna amin'ny alalan'ny Fanjakana iray (ny Fanjakana mangataka na ny firenena) mangataka amin'ny Fanjakana hafa (ny Fanjakana nangatahana) mba hanolotra olona voampanga ho nanao raharaha heloka bevava na heloka bevava ao amin'ny Fanjakana mangataka ho amin'ny fitsarana heloka bevava na fanamelohana. Izany no dingana afindran'ny mpandositra avy amin'ny faritra iray mankany amin'ny iray hafa. Amin'ny ankapobeny, mipetraka na mialokaloka ao amin'ny Fanjakana nangatahana ilay olona saingy voampanga ho nanao heloka bevava natao tao amin'ny Fanjakana nangataka ary voasazy araka ny lalàn'ny Fanjakana iray ihany.
Inona ny heloka bevava azonao averina any UAE?
Ny heloka bevava sasany izay mety iharan'ny famotsorana avy any Emirà Arabo Mitambatra dia ahitana heloka bevava lehibe kokoa, famonoana olona, ​​fakana an-keriny, fanondranana zava-mahadomelina, fampihorohoroana, vaky trano, fanolanana, herisetra ara-nofo, heloka ara-bola, hosoka, fanodikodinam-bola, fanitsakitsahana ny fahatokisana, kolikoly, famotsiam-bola, fandoroana, na fitsikilovana.
Pancho Campo dia matihanina amin'ny tenisy espaniola ary mpandraharaha manana orinasa miorina any Italia sy Rosia. Raha nandeha nitsangatsangana izy dia notanana tao amin'ny seranam-piaramanidina amerikana ary noroahina noho ny antony nahazoany fampandrenesana mena avy any UAE. Noho ny disadisa teo aminy sy ny mpiara-miasa teo aloha tany Dubai no namoahan’ity filazana mena ity.
Ny mpiara-miasa dia niampanga an'i Campo ho nanakatona ny orinasany tsy nahazoana alalana. Nitarika fitsarana tamin’ny tsy naha-teo azy izany. Nony farany, nanambara azy ho meloka tamin’ny fisolokiana ny fitsarana ary namoaka filazana mena tamin’ny alalan’ny INTERPOL momba azy. Na izany aza, niady tamin'ity raharaha ity izy ary nanavotra ny sariny taorian'ny 14 taona niady.
Araka ny fitsipika ao aminy, dia tsy azo avoaka ny filazana mena ho an'ireo mpitsoa-ponenana amin'ny anaran'ny firenena nandosirany. Araka izany, tsy nahagaga raha niharan'ny hatezeram-bahoaka ny famoahana ny filazana mena momba an'i Al-Araibi satria mpandositra nandositra ny governemanta Bahrainita izy. Farany, nesorina ny filazana mena tamin'ny taona 2019.
Namoaka fampandrenesana mena manohitra ny filohan'i Etazonia, Donald Trump, ny governemanta Iraniana, tamin'ny Janoary 2021. Navoaka io fampandrenesana io mba hanenjehana azy noho ny famonoana ny jeneraly Iraniana Qassem Soleimani. Tamin’ny fotoana nipetrahany teo amin’ny seza no navoaka voalohany ilay filazana mena ary nohavaozina indray rehefa niala tamin’ny toerany.
Tamin'ny 2013, nanandrana naka ny INTERPOL ny governemanta rosiana hamoaka fampandrenesana mena manohitra ny CEO an'ny Hermitage Holding Company, William Felix Browder. Talohan'izay dia nifanditra tamin'ny governemanta rosiana i Browder taorian'ny nametrahany azy ireo noho ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona sy ny fitondrana tsy mendrika ny namana sy mpiara-miasa aminy Sergei Magnitsky.
Magnitsky no lohan'ny fampiharana hetra tao amin'ny Fireplace Duncan, orinasa iray fananan'i Browder. Nametraka fitoriana tamin'ny tompon'andraikitra rosiana anatiny izy noho ny fampiasana tsy ara-dalàna ny anaran'ny orinasa noho ny asa fisolokiana. Nosamborina tao an-tranony i Magnitsky taorian'izay, notazonina ary nokapohin'ny tompon'andraikitra. Maty izy taona vitsivitsy taty aoriana. Nanomboka ny ady nataony tamin'ny tsy rariny nanjo ny sakaizany i Browder avy eo, ka noroahin'i Russia hivoaka ny firenena izy ary nalainy ny orinasany.
Herintaona talohan'izay, nesorina tsy ho eo amin'ny governemanta i Yanukovych noho ny fifandonana teo amin'ny polisy sy ny mpanao fihetsiketsehana, izay nitarika fahafatesan'olona maromaro. Nandositra nankany Rosia izy avy eo. Ary tamin'ny Janoary 2019, notsaraina izy ary voaheloka higadra telo ambin'ny folo taona an-tranomaizina raha tsy teo ny fitsarana Okrainiana.
Mifandraisa amin'ny Vaomiera momba ny fanaraha-maso ny rakitra INTERPOL (CCF).
Ny tsirairay amin'ireo dingana ireo dia mety ho sarotra tanterahina raha tsy misy fanampian'ny mpisolovava mahay. Ary noho izany, isika, amin'ny Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants, dia mahafeno fepetra ary vonona hanampy anao amin'ny dingana rehetra amin'ny dingana mandra-pahadio ny anaranao. Antsoy dieny izao raha misy fotoana maika amin'ny 971506531334 + 971558018669 +
Mifandraisa amin'ny vahoaka: INTERPOL dia ao amin'ny tambajotra sosialy toy ny Instagram, Twitter, ary ny hafa. Ny tanjona amin'izany dia ny hifandray amin'ny be sy ny maro, hampita vaovao ary handraisana hevitra. Ankoatr'izay, ireo sehatra ireo dia ahafahan'ny besinimaro mitatitra izay olona na vondron'olona ahiana ho tafiditra amin'ny hetsika tsy ara-dalàna.
Fiantsoana: Nitondra ny anjara birikiny tamin’ny fitadiavana jiolahy karohina ny media sosialy. Miaraka amin'ny fanampian'ny antso an-tariby, ny INTERPOL dia afaka mahita ireo mpanao heloka bevava miafina ao ambadiky ny lahatsoratra sy kaonty media sosialy tsy fantatra anarana. Ny fiantsoana dia fanomezan-dalana avy amin'ny fitsarana ara-dalàna mba hahazoana vaovao, indrindra fa ny an'olon-tsotra, ho an'ny tanjona ara-dalàna.
Hanaraka ny toerana: Nahafahan'ny INTERPOL nanara-maso ny toerana misy ireo ahiahiana ny media sosialy. Amin'ny alàlan'ny fampiasana sary, horonan-tsary dia azon'ny INTERPOL hamantatra ny tena misy ireo olona ahiahiana. Tena ilaina izany amin'ny fanaraha-maso na dia ireo sendikà mpanao heloka bevava lehibe aza noho ny fametahana toerana. Ny haino aman-jery sosialy sasany toa ny Instagram dia mampiasa ny marika toerana, manamora ny fidirana amin'ny porofo amin'ny sary ny fampiharana ny lalàna.
Fihetsiketsehana: Ity dia anarana kaody ho an'ny hetsika iray izay miafina amin'ny fampiharana ny lalàna mba hisamborana mpanao heloka bevava. Ity teknika ity dia nampiasaina tamin'ny media sosialy ary hita fa nahomby. Afaka mampiasa kaonty media sosialy hosoka ny sampan-draharahan'ny fampiharana ny lalàna mba hamantarana ireo mpanao heloka bevava toy ny mpivarotra rongony sy ny pédophile.
Fiarovana ara-dalàna mety hanoherana ny fangatahana fanitarana any UAE
Fifandirana ara-pitsarana na ara-dalàna
Amin'ny toe-javatra sasany, misy ny fifanoherana eo amin'ny lalàna momba ny fitsarana na ny fomba famotsorana sy ny an'ny UAE. Ianao na ny mpisolovava anao dia afaka mampiasa fahasamihafana toy izany, anisan'izany ireo firenena tsy nanao sonia fifanarahana extradition tamin'ny UAE, hanohitra ny fangatahana extradition.
Tsy fahampian'ny heloka bevava roa
Araka ny foto-kevitry ny heloka bevava roa, ny olona iray dia tsy azo esorina afa-tsy raha toa ka mahafeno fepetra ho heloka ao amin'ny Fanjakana mangataka na any amin'ny Fanjakana nangatahana ny fandikan-dalàna ampangaina ho nanao azy. Manana antony hanoherana ny fangatahana extradition ianao izay tsy heverina ho heloka bevava ao UAE ny fandikan-dalàna na fanitsakitsahana.
Ny Fanjakana nangatahana dia tsy manana adidy hamoaka olona iray raha manana antony hinoana fa hanavakavaka ilay olona noho ny zom-pirenena, ny maha-lahy na maha-vavy, ny firazanana, ny fiaviana ara-poko, ny fivavahana, na ny fijoroany ara-politika aza ilay firenena mangataka. Azonao atao ny mampiasa fanenjehana mety hanohitra ny fangatahana extradition.
Fiarovana ny olom-pirenena
Na eo aza ny lalàna iraisam-pirenena, ny firenena iray dia afaka mandà ny fangatahana extradition mba hiarovana ny olom-pireneny na ny olona manana zom-pirenena roa. Na izany aza, ny Fanjakana nangatahana dia mety mbola hanenjika an'ilay olona araka ny lalàny na dia miaro azy amin'ny extradition aza.
Mety tsy hitovy amin'ny politika ny firenena samihafa, ary azo raisina ho fitsabahana ara-politika ny fangatahana extradition, noho izany ny fandavana ireo fangatahana ireo. Fanampin'izany, samy manana ny fomba fijeriny momba ny olana toy ny zon'olombelona ny Fanjakana samihafa, izay manasarotra ny fifanarahana amin'ny fangatahana famotsorana azy, indrindra fa ireo mikasika ireo olana samihafa.
Soa ihany, ireo mpisolovava iraisam-pirenena mpiaro ny heloka bevava ao Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants manana izay tena ilainy. Izahay dia manolo-tena hanome antoka fa ny zon'ny mpanjifanay dia tsy voahitsakitsaka noho ny antony. Vonona hijoro ho an'ny mpanjifanay izahay ary hiaro azy ireo. Izahay dia manome anao ny solontena tsara indrindra amin'ny raharaha heloka bevava iraisam-pirenena miaraka amina manokana momba ny raharaha Filazana Mena.